Uqala njani emsebenzini kaSir Terry Pratchett | Uncwadi lwangoku
Uqala njani emsebenzini kaSir Terry Pratchett
UJoaquin Garcia | | Ababhali, I fantasy
Akukho mbeko ubalaseleyo kumbhali kunokwenza umsebenzi wakhe ufundwe, nokuba umbhali ochaphazelekayo unike oomatiloshe ezi ngqekembe zimbini zesilivere. Kwezinye iimeko, ukufunda nokuphinda ufunde umsebenzi wakhe ngumsebenzi olula kodwa kwezinye kufana Ukufunda umsebenzi kaSir Terry Pratchett kukude kwaye kunzima kuba umsebenzi wakhe wawumkhulu kwaye umde.
USir Terry Pratchett wayengumbhali wase-Bhritane owayeqaqambisa umhlaba kwaye wothuswa nguMagaDisco Saga wakhe, uthotho lweenoveli ezazithetha ngehlabathi elimnandi kwaye zahlukile kwinto eyaziwayo namhlanje, apho Izisele kunye neDragons kunye neTolkien baphawule iparadigm yenoveli emnandi.
1 Isithsaba sikaMalusi, umsebenzi kaPratchett oswelekileyo uyaqhubeka nesaga seDiscworld
3 Abalindi! Abalindi?
4 Oothixo abancinci
7 I-Gnome IEksodus Trilogy
8 I-trilogy kaJohnny Maxwell
9 Isiphelo solu hambo ngomsebenzi kaSir Terry Pratchett
Isithsaba sikaMalusi, umsebenzi kaPratchett oswelekileyo uyaqhubeka nesaga seDiscworld
Ngelishwa ngoMatshi 12, 2015, USir Terry Pratchett usishiyile, emva komlo onzima ne-Alzheimer's, kodwa ngaphambi kokuba asishiye wakwazi ukugqiba inoveli yakhe yamva nje, Isithsaba sikaMalusi, umsebenzi osele ushiyekile ophumeleleyo phakathi kwabalandeli abaninzi u Sir Terry Pratchett awafumanayo.
Ukuba sikuthathela ingqalelo ukufundwa ngabantu baseSpain, izinto ziya zisiba nzima emva koko upapasho lwemisebenzi alwenzwanga njengoko lwalupapashiwe kodwa lwenziwe ngendlela eyahlukileyo kweyabanye, izinto ziya zisiba nzima ngakumbi. Kungenxa yoko le nto sifuna ukwenza eli nqaku libonakalise umyalelo wokwenza ukufundwa kwemisebenzi kaSir Terry Pratchett, hayi nje ukunika imbeko kumbhali kodwa ukonwabele nokukufunda.
I-saga ye-Discworld okanye ikwabizwa ngokuba yi disc ihlabathi yeyona saga idumileyo yombhali, kodwa uSir Terry wayengasoloko epapasha imisebenzi enxulumene neSaga kwaye ngamanye amaxesha Ndiyitshintshe nezinye iintlobo zokupapasha okanye ezokusebenza ezazikude ekulandeleni iyelenqe leMundo disco.
I-saga edumileyo iqala ngokudlala Umbala woMlingo yapapashwa ngo-1983. Lo msebenzi Thetha ngoRicewind, iwizard encinci engenamsebenzi engaphumelelanga ukuphumelela kwiSikolo esingabonakaliyo soMlingo. I-saga ye-adventure ye-Ricewind ilandelwa yile misebenzi ilandelayo: Ukukhanya okumnandi, uRechicero, uEric, amaxesha anomdla kunye nelizwe lokuphela kwehlabathi.
Iindawo zikaRicewind ayisiyiyo kuphela ezenza iSaga yeDiscworld. Kukwakhona nessaga Amagqwirha, ebunjwe yile ngqokelela yeenoveli kwaye iphela ngomsebenzi wokufa kukaSir Terry Pratchett:
IiNkosi kunye namaLadies
Amadoda amancinci akhululekileyo
Umnqwazi ogcwele isibhakabhaka
Olu luhlu lweencwadi luphendula kwihlabathi eliyimfesane kodwa uhlobo lwalo luhluke kakhulu kuleyo ye-Discworld saga. Ngeli xesha imalunga neenoveli zabacuphi ibekwe kwisixeko esihle seAnkh-Morpork.
Abalindi! Abalindi? Ithathelwa ingqalelo inoveli yokuqala kule saga kwaye yeyona ilungileyo kumfundi we-novice, kodwa abanye bakholelwa ukuba yiyo Umlindo wasebusuku. Kukho nawuphi na, ezi ncwadana ziyalandelwa
Ukubukela ebusuku (okanye abalindi! Abalindi?)
Yeyona saga ihlekisayo kunye neyona mihla ukuba kunokwenzeka kuka-Sir Terry Pratchett ukusukela oko wazama ukwenza ukuhlekisa kobudlelwane bexesha lakhe phakathi kwamandla neCawe kunye nokuhlekisa ngenkolo. Umsebenzi ubaliwe ibali likaThixo Om kunye nomprofeti wakhe uBrutha. Lo msebenzi uthetha ngawo ubukhoUnqulo olukholelwa kubunye kodwa luyintsomi kodwa lunokuthelekiswa nobuKristu bangoku okanye ubuSilamsi.
Ibali lithetha ngokufika kwilizwe elibonakalayo likathixo u-Om apho abona khona kwaye aqinisekisa ukuba ngaphandle kokuba nenethiwekhi enkulu yenkolo, umprofeti ogama linguBrutha nguye kuphela okholelwa kuye. Kule meko, sicebisa ukuba ukhethe olona hlobo langoku lomsebenzi, ukusukela nge Iinguqulelo zokuqala zishiye imihlathi ethile yenoveli yentsusa, Impazamo elungisiweyo.
Lo msebenzi uyalandelwa IPyromides y Ukufa noko kuza emva koko. IPyromides uyathetha I-Pteppic, inkosana encinci yobukumkani obuncinci be-Djelibeibi, Oogxa bembali yakudala yase-Egypt. Eli bali libalisa ngeziganeko zalaa nkosana isencinci ibuyela edolophini yayo njengokumkani uthixo. Ukufika kwakhe wadibana nababingeleli benkolo yakhe kunye nokwakhiwa kwepiramidi eyodwa eyahlula ubukumkani obuncinci kwindawo eyahlukileyo eyahlulwe kuyo yonke iDiscworld.
Kwaye iakhawunti ye Ukufa noko kuza emva koko ungayifumana apha ngokupheleleyo ngeSpanish. Libali elifutshane elijolise ekuqhubekeni nesaga yooThixo abancinci, kule meko yokufa, uthixo obonakala rhoqo kwimisebenzi kaSir Terry Pratchett.
Lo msebenzi awunabudlelane kwaphela neDiscworld, nokuba zizixeko okanye hlabathi, kodwa awuyeki qhubeka ithoni yokuhlekisa kunye nesigqebelo esiqulathe uhlaselo kwi-apocalypse, umchasi-Kristu kunye neziprofeto. Kule meko uSir Terry Pratchett wayenentsebenziswano Neil Gaiman, umdali we Sandman, phakathi kweminye imisebenzi emininzi.
UNación akanabudlelwane noMundodisco nokuba, kodwa nombhali, nangona kunjalo yapapashwa kwiinyanga emva kokuba efunyaniswe ene-Alzheimer's. Kulo msebenzi, ngemvelaphi ebalisayo, uSir Terry usixelela ngeengcinga zakhe nakwi ithoni ecinga ngokupheleleyo neyodwa ngaphakathi komsebenzi kaSir Terry Pratchett. Le ncwadana ibalisa ngoMau, osindileyo kuphela kwisiqithi emva kwetsunami yatshabalalisa yonke imizila yobomi kwesi siqithi. Ingaqhelekanga kodwa imvelaphi enkulu yenoveli enomdla.
I-Gnome IEksodus Trilogy
Le saga isixelela Ibali lelaliIdolophu eselunxwemeni lokutshabalala, le dolophu yama-gnomes xa ijongene nengozi enjalo ithatha isigqibo sokuhamba kwaye ithathe uhambo apho iyakufumana ingozi, ezinye iintlanga kunye nezinye iignomes zokuhamba kunye. Le trilogy ijolise kwihlabathi lolutsha kwaye ngenxa yesi sizathu akuqhelekanga ukukhankanywa xa kuthethwa ngombhali nangona kungaphazamisi kuyo ngaphantsi kwezinye i-sagas.
I-trilogy kaJohnny Maxwell
Le saga okanye i-trilogy ikwanabaphulaphuli abancinci kunokuba ngaphezulu kwe-saga yangaphambili. Le trilogy iyatsho Ihambo kunye nobomi bukaJohnny Maxwell oneminyaka eli-12 ubudala ukuba kufuneka ashiye idolophu yakhe xa abazali bakhe beqhawula umtshato. UJohnny Maxwell ugqibela ngokufikisa apho ahlala khona ezinye iintlobo zeentlobo, kodwa kuzo zonke iinoveli sinokubona ukuba uJohnny Maxwell ukhula njani.
Isiphelo solu hambo ngomsebenzi kaSir Terry Pratchett
Njengokuba ubona, Umsebenzi kaSir Terry Pratchett awumncinci kwaphela kodwa u-odolwe kakuhle kunokuba unomdla kakhulu. Ke, kwelinye icala ndohlule izihloko ngemixholo okanye kwi-sagas kwaye kwelinye icala ziye za-odolwa ngumhla wokupapashwa nangona oku kungakhange kuhlonitshwe ngokusekwe kwintsingiselo kunye nokuqonda komfundi, into uninzi lwayo uyazi kubaluleke ngakumbi kunokushicilela iincwadi.
Ngayiphi na imeko, njengoko benditshilo, akukho rhafu ingcono kunokuphinda ufunde imisebenzi yombhali kwaye Umnumzana Terry Pratchett uhlala ezibonakalisile ukuba ufanelekile kwelo rhafu Ngaba awucingi?
Ukugqiba kunye nabanomdla kakhulu, ndikushiya i-infographic kwi-odolo nawo wonke umsebenzi kaSir Terry Pratchett, infographic esinombulelo kubafana abavela i-fancave kwaye ngakumbi uAlkar owenze ngobubele wenza esi sikhokelo sihle esidlangalaleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » I fantasy » Uqala njani emsebenzini kaSir Terry Pratchett
Amava amnandi okufunda incwadi ngeempumlo
UVanessa, igama lothando kunye noncwadi.